NOOK GlowLight 3, fanintelony izao handresy? | Ireo mpamaky rehetra
Joaquin Garcia | | Barnes & Noble, mpamaky
Androany dia hitantsika ny fomba nanombohan'ny Amazon modely vaovao Kindle Oasis, nanavao ny Cervantes ny Bq ary na ny Tolino eropeana aza dia nanangana eReader efijery lehibe, saingy tsy izy ireo ihany.
Barnes & Noble koa dia nanangana fitaovana vaovao: Nook Glowlight 3. Fitaovana izay tsy takelaka voaverina toy ny fitaovana farany fa eReader, eReader miaraka amin'ireo teknolojia farany eny an-tsena ho an'ireo fitaovana ireo.
Nook GlowLight 3 dia fitohizan'ny efijery kely eReader, Nook Glowlight. Ny maodely farany indrindra an'ity fitaovana ity dia natomboka tamin'ny 2015, roa taona eo anelanelan'ny maodely sy ny maodely. Fotoana voamarina noho ny olana nanjo ny fivarotam-boky taloha tamin'ny habaka sy ireo tombony vitsivitsy azony tato ho ato.
The Nook Glowlight 3 dia eReader misy efijery kely, 6-inch, miaraka amin'ny haitao E-Ink ary ny endrika namboarina momba ny maodely teo aloha ary ny fanajana ireo fitaovana mpifaninana hafa. A prioriToa ny eReader vaovao dia azo tanterahina kokoa noho ny fitaovana hafa, izay midika fa azontsika atao ny mampiasa azy amin'ny tanana iray, avelao ho afaka ny ambiny. Zavatra iray izay mitranga koa ao amin'ny Kindle Oasis.
Na izany aza, tsy afaka manamarina izany rehetra izany izahay satria mbola tsy namidy ilay fitaovana, satria mbola eo am-piomanana mialoha izany. Ny refin'ny fitaovana dia: 17,60 x 12,7 x 0,96 cm. Tsy toy ny eReaders hafa, ny Nook GlowLight 3 dia mbola manana bokotra eo amin'ny sisiny hamadika ilay pejy.
Mikasika ny efijery, ny B&N eReader vaovao dia manana efijery miaraka amin'ny teknolojia Carta HD, efijery mikasika ary jiro backlight. Ny famahana ny ny efijery dia 1430 x 1080 teboka ary 300 dpi. Tahaka ny eReaders maro hafa, ny Nook GlowLight 3 dia manana sivana jiro manga, mba hahafahantsika mampihetsika ity fomba ity amin'ny alina ary mamaky tsy misy olana. Amin'ity eReader ity dia azontsika atao ny mamadika ny pejy amin'ny alàlan'ny bokotra na amin'ny rantsan-tànana satria tsy mahay mandanjalanja araka ny voalaza etsy ambony.
Nook GlowLight 3 dia mbola manana bokotra sisiny hamadihana ny pejy
Ny processeur an'ity eReader vaovao ity dia an'ny Freescale, manokana ny modely i.MX 6 ka hatramin'ny 1 Ghz misy ondrilahy 512 Mb sy fitehirizam-bokatra 8 Gb, izay misy 6,5 Gb. Misy zavatra manan-danja satria tsy misy afaka manitatra, satria ny Nook GlowLight 3 dia tsy manana slot ho an'ny karatra microsd.
Ny B&N eReader vaovao dia tsy manana fifandraisana 3G toa ny Amazon Kindle, fa raha manana fifandraisana Wi-Fi ahafahanao mividy ebook na mamindra azy ireo ianao, port microusb hahavita azy amin'ny tanana ary raha any amin'ny magazay B&N isika dia manana fifandraisana hotspot maimaim-poana.
Ny fitaovana dia afaka mamaky ebook amin'ny epub, pdf, ebook misy endrika DRM ary ny endrika: JPG, GIF, PNG ary BMP. Tsy mifanaraka amin'ny fivarotam-boky amin'ny Internet rehetra izy ireo, saingy manana ny endrika fototra sy manerantany ilain'ny mpamaky inveterate.
Mahatratra 50 andro ny fizakantenan'ity fitaovana ity. Fahaleovan-tena avo izay avy amin'ny bateria mihoatra ny 1.500 mAh, na izany no heveriko, satria mbola tsy navoaka ny angon-drakitra milliamp an'ny bateria.
Ny vidin'ny Nook Glowlight 3 dia $ 119, ny vidiny mitovy amin'ny Kindle Paperwhite, fitaovana iray hifaninanany mivantana, na raha tsy izany dia hifaninana mivantana. Ny eReader dia mbola tsy azo vidiana, fa azo tehirizina raha atomboka amin'ny fiandohan'ny fampielezana ny Noely, izany hoe, amin'ny faran'ity volana ity. Fanapahan-kevitra somary sarotra takarina satria ny eReader dia tsy zavatra andrasan'ny mpampiasa maro fa manana maodely mahaliana toy ny ny Kindle Paperwhite na ny Kobo Aura Fanontana 2.
about ny tahan'ny vidiny / kalitao, ny Nook vaovao dia mifaninana, eReader izay hanasarotra ny raharaha ho an'ny mpamorona ny Kindle Paperwhite sy ny Kobo Aura Edition 2. Fa marina fa amin'ny fihenan'ny magazay sy ny katalaogin'ny ebook dia sarotra ny fahombiazan'ity eReader vaovao ity Tsy mieritreritra ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » Hardware » mpamaky » NOOK GlowLight 3 Mandresy amin'ny fanintelony ve?
Tolino Epos, ny safidy alemanina ho an'ny eReaders avo lenta